Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan Oo Xadhigga Ka Jaray Masaajidka Ugu Weyn Dalka Jarmalka – somalilandtoday.com
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan Oo Xadhigga Ka Jaray Masaajidka Ugu Weyn Dalka Jarmalka
(SLT-Berlin)-Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa booqashada rasmiga uu ku marayey dalka Jarmalka ku soo afmeeray xarig ka jaridda mid ka mid ah masaajidda ugu weyn qaaradda Yurub oo laga dhisay dalka Jarmalka
Lahaanshaha sawirkaEPAImage captionBooqashada Erdogan ee Jarmalka waxa ka dhashay mudaharaadyo booqashadiisa looga soo horjeedo
Taageerayaasha iyo dadka ka soo horjeedaba waxay Sabtida isugu yimaaddeen magaalada Cologne.
Lahaanshaha sawirkaREUTERSImage captionMasaajidka Cologne wuxuu ka mid noqday masaajidda ugu weyn qaaradda Yurub
Masaajidka weyn ee laga dhisay magaalada Cologne waxaa dhistay koox diinta Islaamka u dhaqdhaqaaqda oo xiriir dhaw la leh dowladda Turkiga.
Ujeeddada booqashada rasmiga ah uu Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu ku soo maray Jarmalka ayaa lagu sheegay iny ahayd in xal loo helo xiriirka labada dal oo bilihi ugu dambeeyey sii xumaanayey.
Wuxuuna Edrogan sheegay “inuu doonayo xurgufta labada dal u dhaxeysa iney soo afjaranto waxa aan ku kala duwannahay oo halkooda ah inaan danaha aan ka mideysannahay aan ka wada shaqeyno.”
Booqashadana sida oo kale waxaan kaga wadahadalnay ayuu yiri sida aan uga kala duwannahay afgambigi Militari ee dhicisoobay oo Turkiga ka dhacay 2016-kii.
Lahaanshaha sawirkaREUTERSImage captionMadaxweyne Erdogan oo Jarmalka ku tilmaamay mid argagixisada qariya
Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa waxay sheegtay madaxweyne Erdogan khudbad uu habennimadi jimcihi ka jeediyey uu ku sheegay “inuu yahay dal argagixisada qariya”.
Wargeyska Bild oo ka mid ah kuwa ugu caansan jarmalka ayaa wuxuu boggiisa hore uu ku soo daabacay “Khudbadda Erdogan iney ahayd mid uu ku muujiyey naceybka uu Jarmalka uu u qabo isla-markaana cambaareyn kulul uu ugu soo jeediyey”.
Isla Jimcihina Madaxweyne Erdogan iyo Hoggaamiyaha Jarmalka Angela Markel waxay ka wada hadleen dagaalka Suuriya ka socda.
Guddoomiyaha guddiga joogtada ee arrimaha dibadda ee baarlaamanka Jarmalka Norbert Roettgen, ayaa wuxuu wargeyska Funke uu u sheegay “xilliga ay booqashada madaxweynaha ku soo beegantay ay ahayd mid khaldan, xilli horana ay booqashada ku habbooneyd.”